Saans aan Collaaddeed o laga Dareemaayo Gobolka Sool Dhinaca Somaliland iyo Puntland – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Saans aan Collaaddeed o laga Dareemaayo Gobolka Sool Dhinaca Somaliland iyo Puntland
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Sool,ayaa sheegaya in 24 saac ee la soo dhaafay ay deegaanno katirsan Gobolkaasi, laga dareemayay saan saan Coladeed oo u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland.
Dhinaca kale Warar hoose ayaa ka soo baxaya Kulan si qarsoodi ah, oo horaantii Todobaadkan dhexmaray mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland iyo Saraakiil Ciidan ee ka soo jeeda Gobolka Sool, kaas oo looga hadlay Arrima kala duwan oo xasaasi ah.
Sidoo kale Saraakiisha Reer Sool ayaa ballan-qaaday in ay ku dhaqaaqi doonaan abaabulka iyo diyaarinta Hawshaas, waxaase ay dalbadeen Kharashkii lagu fulin lahaa Qorshaha, kaas oo mas’uuliyiinta Somaliland ballan-qaadeen.
Somaliland iyo Puntland,ayaa loolan adag uga jira sidii ay midba midka kale uu deegaanno cusub ugu wareeriga, xeelad kasto hau maree,waxaana xusid mudan in tiro ka dhowr jeer ah ay labadan Maamul ku dagaalameen deegaanno hoosyimada Gobolka Sool, oo ay labada dhinac wada sheegayaan in midkasta uu asiga ka arimiyo.
Previous Duulimaadkii ugu horreeyay oo u kala gooshi doona Israa’iil iyo Imaaraadka aya maanta Billaabmaya
Next Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo sheegay in kalsoonida ay kala laabteen Imaamkooda.